Jona 30, 2018 Admin
fianarana manambara 27% ny UK lahy millennials Bitcoin kokoa ny tena toetrany
UK monina tena toetrany developer Get Velona nampianatra ny fandinihana ary nahita 27% ny lahy millennials ao amin'ny firenena no misafidy ny mampiasa vola any Bitcoin fa tsy Real Estate.
Araka ny tena toetrany developer Get Living, ampahany ny antony manokana ponina nahita ny Bitcoin ho toy ny fampiasam-bola no manintona kokoa ny zava-misy fa millennials mihazona ny fijery fa ny flagship cryptocurrency manana ny ambony mety ny Fantaro raha oharina amin'ny Real Estate.
Nisy nilaza fa millennials mahita ny "Mitombo ny fanatanterahana Bitcoin - nanaraka iray saika mitovy lalina fanitsiana - [ary] mihazona LASA mahaliana kokoa noho ny fanantenana ny fitomboana eo amin'ny trano tapaka vidiny ".
Union Square mahatonga Ventures mandritra ny fotoana maharitra sy ny fampiasam-bola amin'ny crypto blockchain
New York Union Square Ventures dia manana drafitra lehibe hahita soa amin'ny mety tapitrisa tapitrisa dolara sy ny raharaham-barotra tany blockchain crypto in 10 taona.
Albert Wenger, fitantanana mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Union Square Ventures nanao hoe::
"Tsy mahita be dia be ny ambony… Fomba mijery ny tena mpampiasa vola dia nandraraka vola be ho amin'ity sehatra, satria mihevitra aho fa olona nahita ny fandresena blockchain eto mba ho mendrika ny tapitrisa tapitrisa, na roa tapitrisa tapitrisa dolara, Tsy adala mihitsy ny mieritreritra izany. "
Wenger nanely Apple mpiara-manorina Steve Wozniak, izay nilaza tamin'ity herinandro ity fa blockchain mety ho fefy, amin'ny orinasa mandeha kibony-niakatra miaraka amin'izay koa taha ho toy ny teboka-fr vanim-potoana. Fa nilaza izy fa afaka handoavana ireo vola mety ho an'ny mpampiasa vola izay mahazo tamin'ny fiandohan'ny, ka namelatra ny filokana.
"Azo antoka fa, fa misy tetikasa manokana misy vintana faran'izay ambony dia tsy miasa,"Hoy Wenger. "Vokatr'izany, raha miasa, ny valisoa dia ho avo indrindra. "
$1B miditra amin'ny tsena crypto taloha 24 ora
Ny marketcap for cryptocurrency azo $20 lavitrisa in danja nandritra ny farany 24 ora, nandeha avy $233 lavitrisa ny zoma ho any $256 lavitrisa amin'izao fotoana izao.
Thomas Lee, lohany ny fikarohana vao haingana ao amin'ny Financial Fundstrat hoy dolara isaky ny miditra na Fivoahan'ny crypto, misy $20-$25 fiantraikany eo amin'ny tsena crypto vidiny, Midika iray lavitrisa dolara crypto niditra tamin'ny lasa 24 ora.
SEC ka mifidy mba hanamora ny ETF lalàna
US Fiarovana regulator, ny SEC, Nifidy niara mba hanolotra fanalefahana ny fitsipika ho ambany dia mampiseho ny varotra fifanakalozana vola mety ny zavatra mety mety ho fandresena lehibe ho an'ny $3.5 tapitrisa tapitrisa tsena.
raha ampiharina, ny fitsipika hamela orinasa mivarotra ETFs ny hanomboka lavanila dikan-tsotra raha tsy fitadiavana fankatoavana avy amin'ny regulator. Ny SEC nilaza fa manantena fiovana ny fitsipika dia hampitombo fifaninanana sy ny zava-baovao amin'ny alalan'ny fampidinana ny sakana amin'ny fidirana.
Ny fiovana dia fitsipika momba ny tamberina avy any amin'ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, ETF issuers dia tsy maintsy mahazo alalana SEC, fantatra amin'ny anarana hoe exemptive fanampiana, alohan'ny fivarotana vola eo ambanin'ny Investment Company Act ny 1940.
Kaomisera Kara hoy Stein:
"Ny fitsipika dia ahitana maro ny tranonkala fitakiana famborahana izay ao baiko toy ny efa ananana Nampahafantatra ny ETFs aterineto amin'izao fotoana izao zava-dehibe isan-pananana anjara, eny anivon'ny tsena, ary ny Premium na ny fihenam-bidy – tsirairay toy ny raharaham-barotra mialoha ny andro.”
Ny hetra Belza fahefana (STI...